Mareykanka oo beeniyay in si xun loola dhaqmo dadka Muslimiinta ah | Baydhabo Online
Mareykanka oo beeniyay in si xun loola dhaqmo dadka Muslimiinta ah
Midowga Xoriyadda Madaniga ah ee Magaalada Arizona ee Dalka Mareykanka ayaa beeniyay in si xun loola dhaqmo Dadka Muslimiinta ah ee Gobolada Dalka Mareykanka.
War Qoraal ah oo ka soo baxay Midowga Xoriyadda Madaniga ah ee Magaalada Arizona ee Dalka Mareykanka ayaa lagu beeniyay wararka sheegaya in si xun loola dhaqmo Dadka Islaamka iyo Soomaalida Dalkaasi ku nool.
“Waxaan halkan ka cadeyneynaa in aan si xun loola dhaqmin Muslimiinta Mareykanka iyo Soomaalida, maxaa yeelay mar walba waxaan ku howlan nahay sidii aan arrimahaasi uga hortagi laheyn” Ayuu yiri Afhayeen u halday Midowga Xoriyadda Madaniga ah ee Magaalada Arizona ee Dalka Mareykanka.
Midowga Xoriyadda Madaniga ah ee Magaalada Arizona ee Dalka Mareykanka ayaa sidoo kale sheegay in ay wadaan dadaalo looga hortagayo shaqsiyaadka Dalka Mareykanka ka wada Isirnaceybka.
Donald Trump oo ah musharaxa ugu cad-cad tartanka xisbiga Jamhuuriga ee Dalka Mareykanka ayaa si weyn loogu eedeeyaa in uu si xun ula dhaqmo Muslimiinta ku nool Dalka Mareykanka.
Dhowaan ayay aheyd markii Ardayda Soomaalida ah ee ku nool Dalka Mareykanka ay cabasho ka keeneen Macalimiinta Iskuulaadka, kuwaas oo Ardada ku qasba in ay sameeyaan waxyaabo ka soo horjeeda Diinta Islaamka.